TSIAHY SY NY HO AVY
Mahatsiaro, ireo andro fahiny,
Fony ny mbola maitso volo ;
Nihazakazaka tsy nitsahatra,
Nikaroka izay mety ho soa.
Na nisy aza ny nanome tsiny,
Naka mora, anivon'ny tontolo,
Niezaka, tsy nahalala sasatra,
Mba ahazahoana izay mahasoa.
Nananosarotra ny dia naleha ;
Niatrika fahasahiranana maro :
Ny fiolanana havia sy havanana,
Ny rano iampitana sy tetezana,
Ny vao nodiavina sy ny faleha,
Ny asa irery sy ny tagnamaro,
Ny fiafiana sy ny tsy fananana,
Ny hazo tokana, izay nofehezina.
Ny ahatsemboan'ny tava tokoa,
Araka ny teny izay voasoratra,
No làlana ahazoana ny hanina,
Mandra-piverina amin'ny tany.
Ka mila miezaka, mivaky loha,
Misahirana mitana an-tsoratra ;
Fa tsy mandany andro misonanina,
Ahafahana ny mandroso hatrany.
Ankehitriny, miha-fotsy ny volo ;
Mandroso, miha-mahazo taona.
Hazo amoron-tevana, efa hadiva ;
Mamisavisa, eny, in-tsivy im-polo,
Ny hitranga, mety hoe ahoana ?
Eo am-pitaninandro, ny hariva,
Ny maso mitopy any an-danitra.
Sokajy : Aingam-panahy, embona, Eritreritra mandalo, Fahatsiarovana, fiainana